नेपाली माटोमा गोबध सुहाउन्न - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
नेपाली माटोमा गोबध सुहाउन्न
Published On : १८ चैत्र २०७४, आईतवार ०६:५४
केहीदिनअघि प्रदेश नं. ३ की उपसभामुख राधिका तामाङले गाई काट्न पाउनु पर्ने ब्यबस्थाका लागि संसदमा आवाज उठाइन् । यस्तै आवाज केही बर्षअघि पद्मरत्न तुलाधरले पनि उठाएका थिए । तर अधिकांश नेपालीले यी आवाजको बिरोध गरे, आलोचना गरे । अन्तत ः सेलायो ।
नेपाल हिन्दू बाहुल्य भएको मुलुक हो । हिन्दूहरुले गाईलाई पूजा गर्छन् । त्यसमाथि पनि गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको मर्यादा पनि दिएका छन् । देवता मानेर पूजा गर्ने जनावरलाई काट्ने प्रसंग बहुसंख्यक नेपालीलाई पच्दैन । आफ्नो आस्थाको प्रतीकलाई काट्ने बिषय नपच्नु कसैका लागि पनि अस्वभाविक होइन ।
यद्यपि नेपाल धर्म निरपेक्ष मुलुक हो । धर्म निरपेक्षको अर्थलाई बङ्ग्याएर अरुको धर्मलाई अपमान हुने व्यबहार गर्न पाइने भन्ने होइन । गाईलाई देवी नमान्ने धर्मावलम्बीले नमान्न पाउँछन् । मान्नेले सकेसम्म संरक्षण गर्न वा बचाउन पाउँछन् । कसैले मार्ने, कसैले जोगाउने गर्दा हुनसक्ने तनाब, द्वन्द्व थेग्न मुलुकलाई हम्मेहम्मे पर्न सक्छ । काटेर खान बिभिन्न अन्य पशुचौपाया हुँदाहुदै राज्यले यो परिस्थिति सिर्जना हुन दिनु हुन्न । त्यसैले द्वन्द्व निम्त्याउने काम नगर्दा नै बेश हुन्छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा कहिले बिपदको नाममा, कहिले द्वन्द्वको नाममा अस्थिरता मच्चाएर रजाइँ गर्ने नियत भएकाहरुको उक्साहटमा द्वन्द्व मच्चाउनु वुद्धिमानी हुदैन ।
धर्म निरपेक्ष मात्र होइन, नेपाल धार्मिक सहिष्णुताको मुलुक पनि हो । यसको मर्मलाई हृदयंगम गरी एउटाले सम्मान गरेकालाई अर्काले अपमान नगर्ने नीति अपनाउनु नै वुद्धिमानी हुन्छ ।
केही दिनअघि सिम्जुङमा गाई काट्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यसबाट पनि गाई काट्नु हुन्न रहेछ पाठ सिक्नु पर्छ ।
एक महिनाभित्र दरौँदी लिफ्टिङ वृहत खानेपानी आयोजनाको पानी गोरखा बजारमा आउने भनेर दुई बर्षअघि समाचार
गोनपा दुई की एक महिलाको शव कीर्तिपुरको बल्खु खोलामा
कीर्तिपुरको बल्खु खोलामा गोरखाकी एक महिलाको शव फेला परेको छ। कीर्तिपुर र चन्द्रागिरिको बीचमा रहेको
बढ्दो सडक दुर्घटना : वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढी क्षति
यस पटकको दसैँ पनि धेरै परिवारका लागि दशा बनेको छ । दसैँ अवधिमा देशका विभिन्न